China Turnkey Fivarotana Pcb Fivoriambe mora vidy | KAISHENG PCB
PCBFuture dia orinasa mifantoka amin'ny mpanjifa izay mifantoka amin'ny fanomezana vahaolana avo lenta sy mahomby namboarina ho an'ny vidin'ny fifaninanana. Izahay dia mitombo amin'ny fanolorana mpanjifa miaraka amina serivisy tokana an'ny PCB hanohanana serivisy feno miaraka amin'ny boriborintany mandroso, famokarana PCB betsaka, fivoriambe PCB, ampahany mividy vahaolana amin'ny PCB turnkey.
Vy Coating: Immersion Gold
Fitaovana vy: volamena milentika Fomba famokarana: SMT + Sosona: PCB 2 sosona
Karazana solder: mifanaraka amin'ny RoHS Serivisy tokana: PCB Manufacturing And Turnkey PCB Assembly Fitsapana: Fitsapana 100% AOI / E-test / Visual
Teny lakile: Assembly PCB Production PCB be, turnkey PCB, mpanamboatra PCB Assembly, serivisy fivarotana PCB iray, Assembly PCB mora vidy, orinasa fivoriamben'ny birao vita pirinty
Antony hisafidianana PCBHOAVY
1. Fitaovana maoderina avo lenta haingam-pandeha nafarana ambony mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra avy amin'ilay loharano.
2. Fitaovana fitsaboana feno eto ambonin'ny tany afaka mifanaraka amin'ny filan'ny indostria isan-karazany.
3. Fahaiza-manao teknikan'ny PCB Multilayer Circuit Board.
4. Rafitra fanaraha-maso kalitao PCB henjana mba hiantohana ny fahombiazan'ny vokatra.
5. Ekipa Teknika ambony.
6. Serivisy akaiky.
6. Loharano ilaina.
Fivorian'ny SMT PCB
Fitsapana sy fandaharana
Inona no tafiditra ao amin'ny vidinao voalaza?
Izahay dia hanome anao ny vidiny ho an'ny fivoriambe PCB. Ny vidin'ny fivoriambe PCB dia misy ny fitaovana, ny maodely solder ary ny asan'ny fiangonana amin'ny famoahana ireo singa. Ny teny nalahatra nataonay dia mampiseho ihany koa ny vidin'ny singa araky ny voalaza. Tsy mandoa saram-pametrahana na saram-pamoriana NRE izahay.
Ny tetikasa Lead Time manontolo dia ny fotoana fitarihana ampahany amin'ny fizarana ary ny fotoana fitarihana PCB Assembly. Na izany aza, manandrana hanafohezana ny tsipika fizarana izahay amin'ny alàlan'ny fampivoarana ny fizotran'ny fivoriambe PCB. Ohatra, raha vao mahazo ny Gerber Files anao amin'ny famokarana PCB sy ny BOM ho an'ny fivoriambe PCB izahay dia hanomboka ny fanomanana ny stencil ho an'ny tabilaonao ary hamita ny fanamboarana miaraka amin'ny fizotran'ny fizarana ampahany.
PCBFuture dia hamonjy fotoana na vidinao ary hampihena ny loza mety hitranga mba hahitana ny andraikitry ny mpamatsy maro. Manohana ny fihodinana haingana izahay miaraka amin'ny ora fanaterana ara-dalàna mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa. Manana ekipa matanjaka izahay izay misy mpiandraikitra voamarina mba hiantohana ny kalitaon'ny tabilao misy anao.
Teo aloha: Tablet PC Turnkey PCB fivoriambe elektronika
Manaraka: Fivorian'ny birao fanaraha-maso ny fiara
Antenimiera Pcb elektronika
mpanamboatra fivoriambe pcb
fivoriambe pcb akaikiko
serivisy fivoriambe pcb
pcb famokarana sy fivoriambe
fivoriambe pcb prototype